Myanmar Entrepreneur Group: Never disappoint, be sturdy
Posted by : စိုးထက် - Soe Htet ! Posted @ 1:27 PM
flower September 5, 2008 at 3:25 PM
စိတ်ပျက်နေဖို့ဆိုရင် တွေးလိုက်တိုင်း စိတ်ပျက်စရာချည်းပဲ ပေါ်လာမှာပါ။
ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုရင် ပျော်စရာတွေကိုပဲ တွေးဖြစ်ကြမှာပါ။
ဘယ်လိုပဲ အခြေအနေတွေရှိပါစေ လူငယ်တွေဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမှာ မိမိအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သော်လည်းကောင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်ကို ရအောင် ဖန်တီးကြိုးစားဖို့က youth's responsibility ပါ.......
စိုးထက် - Soe Htet ! September 5, 2008 at 4:23 PM
khin oo may September 5, 2008 at 10:42 PM
ဖတ်သွားသည်.။ယနေ့ အတန်ငယ် ညည်းငွေ့နေသည်.
(ထာက်ပြ ပြောဆိုလိုက်ရင် လည်း သူတို့မှာ အကြောင်းပြချက် တွေက တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး။)
zaonoik September 6, 2008 at 8:47 PM
ဒီဆောင်ပါးကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်... ဒါဟာ အရေးကြီးပါတယ်...